မိသားစုအစီအစဉ်တစ်ခုရိုက်ကူးပြီး အလှူငွေတွေရှာထားခဲ့လို့သာ Second Waveမှာ ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက် ခံသာတယ်လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလာတဲ့ ချစ်သုဝေ - Cele Connections
မိသားစုအစီအစဉ်တစ်ခုရိုက်ကူးပြီး အလှူငွေတွေရှာထားခဲ့လို့သာ Second Waveမှာ ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက် ခံသာတယ်လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလာတဲ့ ချစ်သုဝေ
အဆိုတော် လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေတို့ ဇနီးမောင်နှံကတော့ စိတ်တူကိုယ်တူနဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်သလို အများအကျိုးကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နေသူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေတို့က သမီးလေးတွေနာမည်နဲ့ ခေတ်သစ်ဖောင်ဒေးရှင်းကိုတည်ထောင်ထားပြီး အလှူရှင်တွေနဲ့အတူတူ လိုအပ်နေတဲ့နေရာလေးတွေကို ဖြည့်စွက်လှူဒါန်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ ချစ်သုဝေက ခေတ်သစ်ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ရှင်းပြလာပြီး မိသားစုအစီအစဉ်တစ်ခုရိုက်ကူးပြီး အလှူငွေတွေရှာထားခဲ့လို့သာ Second Wave ကို ခံသာတယ်လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
“တကယ့်မြေပြင်က ကိုယ့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ ဘယ်သို့ ဘယ်ပုံ ရုန်းကြရတယ်ဆိုတာ တွေးကြည့်ရုံနဲ့ HSဆင်းတဲ့ဘဝတန်းပြေးမြင်မိသလိုပါပဲ။ ခုချိန်ကတော့ပိုတာပေါ့ ဆရာ၊ ဆရာမ အတန်းဖော်၊ သူငယ်ချင်း၊ အငယ် ဘယ်သူ့ဆီကကြားကြား လိုအပ်ချက်တွေအနည်းနဲ့အများ..ဘာကြောင့်ဆို မာယာများတဲ့ ဒီ covidကို ချဉ်းကပ်ကြရတာကိုး။ ဆေးလည်းကုရ လူနာစောင့်မရှိတဲ့လူနာတွေအပေါ် လည်းကူရ မတွေးလိုက်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကလည်းလုပ်ရင်းကိုင်ရင်းပေါ်လာရနဲ့ အကုန်လုံးလုပ်ကြရတာ။ ဒါ့ကြောင့် နေ့တိုင်းမေး နေ့တိုင်းလိုတာဖြည့်၊ NOGH isolation wardတွေ လိုတာတွေ တတ်နိုင်တာတွေ ဖြည့်နေတုန်း အသစ်ပြင်နေတဲ့ ICUကိုဖြည့်နေတုန်း deep cleanအတွက် သန့်ရှင်းရေးကို ဝန်ထမ်းတွေရော သူနာပြု တွေရော ဆရာဝန်တွေရော ဝိုင်းကြဝန်းကြမယ်ဆိုတော့ ဖောင်ဒေးရှင်းကနေတာဝန်ယူပြီး Deep cleansing n disinfection serviceကို ဌါးရမ်းလှူပေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ volunteer တွေလည်းမောနေပြီမို့လားနော်။ ပြီးတော့ဆေးရုံရဲ့ သန့်ရှင်းရေးဟာ ဒီလိုပဲ စနစ်တကျဖြစ်သင့်တာမို့ လှူဖြစ်ခဲ့တယ်။”
“ဖိစီးမှူတွေများနေတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက် လူနာတွေအတွက် သန်းရှင်းသပ်ရပ်တဲ့ဝန်းကျင်လေးလိုတယ်လေနော်။ နောက်ခံတပ်တစ်ခု အဆင်သင့်စေဖို့ တဖက်တစ်လမ်းက ကူနိုင်ခဲ့ပြီ။ အရမ်းကိုစိတ်ချမ်းသာမိလို့ အလှူရှင်တွေ လည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်နော်။ နိုင်သလောက်အလှူတွေလည်းထည့်ဝင်ကြပါလို့ အားနာစွာ ထပ်နိုးဆော်ချင်ပါသေးတယ်။ 2nd wave ရိုက်ချက်ပြင်းတယ် မိသားစု program လေးရိုက်ပြီး အလှူငွေတွေရှာထားခဲ့လို့သာ ခံသာတယ်။ ခုအရင် အလှူငွေစုထားတာတွေ နဲ့လှူနေရတာ သိန်း 700ကျော်ပြီ။ စုစုပေါင်း2nd. Waveမှာ လှူဒါန်းပြီးစီးတာ သိန်း 1700ကျော်ပါပြီ။ အလှူရှင် တွေကိုလည်းသိပ်ကိုကျေးဇူးတင်တာပဲ။ ခေတ်ကျပ်ထဲ အလှူတွေခုထိလည်းမပျက်လှူကြလို့🙏🙏” ဆိုပြီး ပြောလာပါတယ်။
ချစ်သုဝေကတော့ ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ခေတ်သစ်ကမ္ဘာဆိုတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုကို ရိုက်ကူးခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ထိုအစီအစဉ်မှရရှိတဲ့ ငွေကြေးတွေကို ကိုယ်ကျိုးအတွက် သုံးစွဲခြင်းမပြုပဲ ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်သာ ထည့်ဝင်အသုံးပြုခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
မိသားစုအစီအစဉျတဈခုရိုကျကူးပွီး အလှူငှတှေရှောထားခဲ့လို့သာ Second Waveမှာ ဖောငျဒေးရှငျးအတှကျ ခံသာတယျလို့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောလာတဲ့ ခဈြသုဝေ
အဆိုတျော လငျးလငျးနဲ့ ခဈြသုဝတေို့ ဇနီးမောငျနှံကတော့ စိတျတူကိုယျတူနဲ့ အနုပညာအလုပျတှကေို လုပျကိုငျသလို အမြားအကြိုးကို သယျပိုးဆောငျရှကျနသေူတှလေညျး ဖွဈပါတယျ။ လငျးလငျးနဲ့ ခဈြသုဝတေို့က သမီးလေးတှနောမညျနဲ့ ခတျေသဈဖောငျဒေးရှငျးကိုတညျထောငျထားပွီး အလှူရှငျတှနေဲ့အတူတူ လိုအပျနတေဲ့နရောလေးတှကေို ဖွညျ့စှကျလှူဒါနျးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနမှေ့ာတော့ ခဈြသုဝကေ ခတျေသဈဖောငျဒေးရှငျးနဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှကေို ရှငျးပွလာပွီး မိသားစုအစီအစဉျတဈခုရိုကျကူးပွီး အလှူငှတှေရှောထားခဲ့လို့သာ Second Wave ကို ခံသာတယျလို့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
“တကယျ့မွပွေငျက ကိုယျ့ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှေ ဘယျသို့ ဘယျပုံ ရုနျးကွရတယျဆိုတာ တှေးကွညျ့ရုံနဲ့ HSဆငျးတဲ့ဘဝတနျးပွေးမွငျမိသလိုပါပဲ။ ခုခြိနျကတော့ပိုတာပေါ့ ဆရာ၊ ဆရာမ အတနျးဖျော၊ သူငယျခငျြး၊ အငယျ ဘယျသူ့ဆီကကွားကွား လိုအပျခကျြတှအေနညျးနဲ့အမြား..ဘာကွောငျ့ဆို မာယာမြားတဲ့ ဒီ covidကို ခဉျြးကပျကွရတာကိုး။ ဆေးလညျးကုရ လူနာစောငျ့မရှိတဲ့လူနာတှအေပျေါ လညျးကူရ မတှေးလိုကျတဲ့လိုအပျခကျြတှကေလညျးလုပျရငျးကိုငျရငျးပျေါလာရနဲ့ အကုနျလုံးလုပျကွရတာ။ ဒါ့ကွောငျ့ နတေို့ငျးမေး နတေို့ငျးလိုတာဖွညျ့၊ NOGH isolation wardတှေ လိုတာတှေ တတျနိုငျတာတှေ ဖွညျ့နတေုနျး အသဈပွငျနတေဲ့ ICUကိုဖွညျ့နတေုနျး deep cleanအတှကျ သနျ့ရှငျးရေးကို ဝနျထမျးတှရေော သူနာပွု တှရေော ဆရာဝနျတှရေော ဝိုငျးကွဝနျးကွမယျဆိုတော့ ဖောငျဒေးရှငျးကနတောဝနျယူပွီး Deep cleansing n disinfection serviceကို ဌါးရမျးလှူပေးဖွဈခဲ့တယျ။ volunteer တှလေညျးမောနပွေီမို့လားနျော။ ပွီးတော့ဆေးရုံရဲ့ သနျ့ရှငျးရေးဟာ ဒီလိုပဲ စနဈတကဖြွဈသငျ့တာမို့ လှူဖွဈခဲ့တယျ။”
“ဖိစီးမှူတှမြေားနတေဲ့ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှအေတှကျ လူနာတှအေတှကျ သနျးရှငျးသပျရပျတဲ့ဝနျးကငျြလေးလိုတယျလနေျော။ နောကျခံတပျတဈခု အဆငျသငျ့စဖေို့ တဖကျတဈလမျးက ကူနိုငျခဲ့ပွီ။ အရမျးကိုစိတျခမျြးသာမိလို့ အလှူရှငျတှေ လညျးစိတျခမျြးသာအောငျဝမြှေလိုကျပါတယျနျော။ နိုငျသလောကျအလှူတှလေညျးထညျ့ဝငျကွပါလို့ အားနာစှာ ထပျနိုးဆျောခငျြပါသေးတယျ။ 2nd wave ရိုကျခကျြပွငျးတယျ မိသားစု program လေးရိုကျပွီး အလှူငှတှေရှောထားခဲ့လို့သာ ခံသာတယျ။ ခုအရငျ အလှူငှစေုထားတာတှေ နဲ့လှူနရေတာ သိနျး 700ကြျောပွီ။ စုစုပေါငျး2nd. Waveမှာ လှူဒါနျးပွီးစီးတာ သိနျး 1700ကြျောပါပွီ။ အလှူရှငျ တှကေိုလညျးသိပျကိုကြေးဇူးတငျတာပဲ။ ခတျေကပျြထဲ အလှူတှခေုထိလညျးမပကျြလှူကွလို့🙏🙏” ဆိုပွီး ပွောလာပါတယျ။
ခဈြသုဝကေတော့ ရုပျသံလိုငျးတဈခုနဲ့ ခြိတျဆကျပွီး ခတျေသဈကမ်ဘာဆိုတဲ့ အစီအစဉျတဈခုကို ရိုကျကူးခဲ့တာ ဖွဈပွီး ထိုအစီအစဉျမှရရှိတဲ့ ငှကွေေးတှကေို ကိုယျကြိုးအတှကျ သုံးစှဲခွငျးမပွုပဲ ဖောငျဒေးရှငျးအတှကျသာ ထညျ့ဝငျအသုံးပွုခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
ပြန်မလာတော့မယ့် ခရီးရှည်ကြီးကို ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်တဲ့ မီးမီးခဲအတွက် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကို Brice ရေးတဲ့ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ စာတစ်စောင်